ဂျူး ၊ ကျွန်တော်….နှင့် ဒီဇင်ဘာ အတွေးများ…. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Arts & Humanities » ဂျူး ၊ ကျွန်တော်….နှင့် ဒီဇင်ဘာ အတွေးများ….
ဂျူး ၊ ကျွန်တော်….နှင့် ဒီဇင်ဘာ အတွေးများ….
Posted by alinsett on Jun 25, 2011 in Arts & Humanities, Creative Writing, Critic | 10 comments
ကျွန်တော် တို့ ရဲ့အတွေးများ...
* ကျွန်တော် က စာပေအနုပညာသမား အဖြစ်ခံယူမယ်။ စာတွေရေးမယ်။ ဘာကြောင့်လဲ….လို့မေးလာခဲ့ ရင် အဖြေက အဆင်သင့်ပါပဲ။
ကျွန်တော်က တခြားသူတွေကို ပြောပြချင်တဲ့စကားတွေ… အများကြီးရှိနေတတ်လို့ပါပဲ။ ကျွန်တော့် ရင်ထဲမှာ တွေးတော ခံစားမိတာတွေ
များ….များလာတဲ့ အခါ တစ်ယောက်ယောက်ကို ပြောပြချင်လာပါတယ်။ ကျွန်တော် ပြောချင်တာတွေကို လူတွေ အများကြီး နားထောင်နိုင်အောင်
လုပ်ဖို့အာဏာ မလိုချင်ဘူး။ လက်နက် မလိုချင်ဘူး။ ပြီးတော့ ငွေ နဲ့ လည်း….မပြောချင်ဘူး ။
အဲဒီ ရုပ်ကြမ်းဝါဒ ဆိုင်ရာ နည်းတွေ နဲ့မပြောချင်ပါဘူး။ အနုပညာ နဲ့ ပဲပြောချင်ပါတယ်။ အနုပညာရပ်တွေထဲမှာမှ…..
စာပေအနုပညာကို ပို အားသာ တဲ့ အတွက် စာပေနယ်ထဲ တိုးဝင်မိပါတယ်။ စာပေအနုပညာကို အကြောင်းပြုပြီး ကျွန်တော့် တိုင်ပြည်နဲ့ 
က၊ျွန်တော်တို့ ဟာ….. နောင် လာမယ့် မျိုးဆက်အတွက် အပင်တွေ စိုက်ခဲ့ ဖို့တာဝန်ရှိနေတယ်လေ။ နောက် လာမယ့် 
မျိုးဆက်အသစ် အတွက် အရိပ်ရဖို့၊ အသီးအပွင့်တွေ စား သုံး ရဖို့သစ်ပင်ကောင်းကောင်းတွေ စိုက်ခဲ့ နိုင်မှ ကျွန်တော်တို့တာဝန်ကျေမယ်။
အဲဒီလိုပဲ ကျွန်တော် ခံစား ယူဆ မိပါတယ်။ အဲဒီခံစားချက်တွေ ရှိနေချိန်မှာပဲ ကျွန်တော် မော်လမြိုင်မြို့ ကို ခရီး ထွက်ခဲ့ ပါတယ်။
တိုက်ဆိုင်စွာ ပဲ ဆရာမဂျူး ရဲ့စာပေဟောပြောမှု တစ်ခုနဲ့ကြုံဆုံ ခဲ့ ရပါတယ် ။
နောက်ထပ် တိုက်ဆိုင်တာက ဆရာမဂျူး ကလည်း မျိုးဆက်နဲ့သစ်ပင် အကြောင်း ထည့် ပြောသွားပါတယ် ။
” ” မင်းသားလေးက မေးလိုက်တယ်။ အဘိုးရယ်……ဒီသရက်ပင်က အသီးတွေ သီးတဲ့ အချိန်မှာ အဘို့း က ရှိတော့မှာမှ မဟုတ်တာ….။
ဘာလို့စိုက်နေတာလဲ……….တဲ့ ။ အဲဒီလိုမေးတော့ အဘိုးအိုက သိပါတယ် ။နောင်လာနောင်သားတွေ…စားဖို့စိုက်နေတာပါ……..
လို့ပြန်ဖြေလိုက်တယ်………။
အဲဒီ အဘိ်ုး အို တို့မျိုးဆက် က( ဆရာကြီးဇော်ဂျီ တို့မျိုးဆက် ပေါ့လေ…) ကျွန်မတို့အတွက် သရက်ပင်တွေ စိုက်ပေးခဲ့ တဲ့ 
မျိုးဆက်ပါ။ အခု ကျွန်မ တို့ ကရော ….. နောင်လာမယ့် မျိုးဆက်အတွက် သရက်ပင်တွေ စိုက်ခဲ့ မယ့်မျိုးဆက်မှ ဟုတ်ရဲ့ လား…. ။” ‘
လက်ခုပ်သံများ…………….။ ကျွန်တော် ဂျူး ကို အားရကျေနပ်စွာ…. ကြည့်နေမိတယ် ။ ဂျူးက သူ့အတွေးကို ဆက်ပြောပါတယ် ။
” ” ကျွန်မ စာတွေရေးတယ် ။ ကျွန်မ စာတွေက လူတွေကို ဘယ်လောက် အကျိုးရှိစေမှာလဲ….. ။ မသေချာဘူး။
ဒီအချိန်မှာပဲ…. ကျွန်မ ကာတွန်း ပညာရှင် အော်ပီကျယ် ရဲ့ကာတွန်းလေးတစ်ကွက်ကို တွေ့ သွားတယ်။
ကားတွန်းးလေးက ထိ မိ် ပါတယ်။ ပုံပြင်ထဲက လိုပဲ အဘိုးအိုတစ်ယောက် သရက်ပင်ပေါက်ကလေးတွေ စိုက်နေတာကို
မင်းသားလေး တစ်ပါးက မေးနေတာ…..။
အဘိုးက နောင်လာနောင်သားတွေစားဖို့စိုက်နေတာ ပေါ့နော်….. တဲ့ ။ အဲဒီလိုမေးတာကို အဘိုးအိုက ရိုးရိုးလေးပဲ
နောင်လာနောင်သားတွေစားဖို့ စိုက်နေတာ မဟုတ်ပါဘူး…။ သရက်ပင်ပေါက်ကလေးတွေ ရောင်းစား ဖို့စိုက်နေတာပါ……..တဲ့ ။ ” “
ခုဏ က ထက် ပိုကျယ်တဲ့လက်ခုပ်တီးလိုက်သံများ…….။ ဟေးးးးးးးးးး ခနဲ အော်လိုက်သံများ……….။ ကျွန်တော်လည်း ထိတ်လန့် စွာ…
* ကျွန်မတို့မျိုးဆက်က သရက်ပင်ပေါက်ကလေးတွေ ရောင်းစားမယ့်မျိုးဆက် ဖြစ်နေပြီလား……**
လို့မေးလိုက်တဲ့ဂျူးရဲ့စကားက ကျွန်တော့် ကိုယ် ကျွန်တော် ပြန်မေးနေမိတဲ့မေးခွန်းပါပဲ။
တကယ်ပဲ အပင်ပေါက်ကလေးတွေ ရောင်းစားသွားမယ့်/ ရောင်းစားနေတဲ့မျိူးဆက် ဖြစ်နေပြီလား…..
သေချာတာကတော့ ဒီမေးခွန်းကို မေးနေရပြီ၊ ဖြေ ဖို့အဖြေရှာနေရပြီ ….ဆိုကတည်းက ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ 
အခြေအနေက (နည်းနည်းတော့) စိုးရိမ်စရာ ကောင်းနေပြီ……..။ ။။။
30 .12 .2010 မော်လမြိုင်မြို့စာပေဟောပြောပွဲရောက် အမှတ်တရ ည
22 .6.2011 . 103း0 pm
ကမ္ဘာကြီး က သစ်ပင်တွေ အရေးပေါ်လိုအပ်နေချိန်ဆိုတော့ ဘယ်လို ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ရောင်းတာပဲ ဖြစ်ဖြစ် စိုက်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကောင်းပါတယ် လို့ ပဲ ခံစားမိတယ် ဗျာ ။ ရောင်းစားဖို့ ရည်ရွယ်ခဲ့ရင်တောင် ကမ္ဘာမှာ ရှင်သန် လာမယ့် သစ်ပင်ပေါက် ကလေး ကို အရင် ပြုစုပျိုးထောင်ရမှာ မဟုတ်လား ။ ဝယ်စိုက်မယ့်သူ လက် မရောက်မချင်း ကိုယ့်လက်ထဲ မှာ ရှင်သန်စိမ်းလန်း နေအောင် ပြုစု ပျိုးထောင်နေရာမှာ ပဲ မို့ ။ ဂွတ် ပါတယ် ။
ဂဗာကြီးထဲ ဘယ်နေရာက သစ်ပင်တွေ အလိုအပ်ဆုံးလဲတော့ မသိ…
လောလောဆယ်.. ရန်ကုန်ကတော့ ပူလိုက်တာမှ…
မြို့လယ်က ပန်းခြံတွေမှာ ဆို…အချိန်ပြည့် လူတွေ ပြည့်ကျပ်နေတယ်… ထိုင်စရာ နေရာလွတ်တောင်မရှိတော့ဘူး။
ရောင်းစားတယ် ဆိုရင်တော့ ၀ယ်တဲ့ သူ့ ကလည်းအလကား တော့ ဘယ်ဝယ်ပါ့မလဲ။ ဒီသစ်ပင် ပေါက်က ချက်စားလို့လဲ မရဘူး။ ချက်ချင်း ကြီး သစ်ထုတ်လုပ်လို့လည်း မရဘူး ဆိုတော့ ၀ယ်တဲ့ သူကလည်း စိုက်ပျိုးဖို့ ပဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။ ကိုယ်တိုင်ပဲ ပျိုးစိုက်စိုက် ၊ သူများဆီက ပဲ ၀ယ်စိုက်စိုက် သစ်ပင်စိုက်တာ ကောင်းတဲ့ အလုပ်ပါ။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကို အလင်းဆက်ရေ…ဆရာမရဲ့ အတွေးအမြင်လေးတွေ ပြန်ဝေငှပေးတဲ့အတွက်ရော၊ ခင်ဗျားတွေးတဲ့ အတွေးအတွက်ရောပါ၊ တကယ်ကို တွေးကြည့်ဖို့ကောင်းနေပါပြီ။ကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်မှာ ဒီလိုမျိုးရောင်းစားမယ့်သူတွေ တကယ်ပဲများလာကုန်ကြပါပြီ၊ ခင်ဗျားရဲ့လူသားဆန်မှုအတွက် Bravo ပါဗျာ၊
ဆရာမဂျူးရော၊ ဆရာ အော်ပီကျယ်ရော ပြောချင်တာက အပင်ပေါက်ကို မစိုက်ပဲ ရောင်းစားတဲ့ စိတ်ဓာတ် ကို ထင်ပါတယ်။ ပထမပုံပြင်က အဖိုးက စိုက်လည်းစိုက်မှာပါ အပင်ပေါက်ရှိရင်လည်း လိုချင်တဲ့သူကို အလကားပေးမယ့် စိတ်ဓာတ်မျိုးပါ။ သူ့ရည်ရွယ်ချက်က စေတနာသက်သက်ပါ။ ဆရာ အော်ပီကျယ်ရဲ့ ဒုတိယ ပုံပြင်ထဲက အဖိုးရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က ပထမအဖိုးနဲ့မတူပါဘူး။ အပင်သက်သက်ကို ဆိုလိုတာ မဟုတ်ပဲ စေတနာနဲ့ ရည်ရွယ်ချက် ကိုသာ ဆိုလိုပုံရပါတယ်။ ဒါကို သရော်တာလို့ ယူဆပါတယ်။ အပင် သက်သက်ဆိုရင်တော့ windtalker နဲ့ weRone ပြောတာ မှန်ပါတယ်။
အဲဒီနေ့ညက ဂျူးဖြေခဲ့တဲ့ ပညာသင်ရခြင်းအကြောင်းရင်းတွေကို ကြိုက်ပါတယ် … လူငယ်တွေ သိသင့်တယ်လို့ထင်တယ် …
လောကကြီးမှာ ရှာရဖွေရခက်လေ ကိုယ့်အတွက် ကိုယ်ပိုကြည့်မိလေပါ။
အဲဒီအထဲကမှ သူများအတွက်ကို ပိုကြည့်ဖြစ်သူတွေကတော့ လေးစားစရာလူတွေပေါ့ဗျာ။
ဂျူးရဲ့အတွေးနဲ့အရေးကတော့အံ့မခန်းပါ အမှတ်ကရကို ဖတ်ပြီးတဲ့ အချိန်တုန်းကဆိုရင် မဖြစ်နိုင် မှန်းသိသိကြီးနဲ့ ရေနီမြောင်းဘေးရောက်တိုင်းအဲ့ဒီအိမ်လေးများ ရှိမလား ဆိုပြီးရှာကြည့်မိတယ် ဒါတောင်မနှစ် ကမှ အဲ့ဒီစာအုပ်ကိုဖတ်ဖူးတာ
ပြောချင်တာတွေများတဲ့သူတွေအတွက် MG က အကောင်းဆုံးပါပဲ။(မြန်မာလိုပဲပြောနော် ) နောင်လာနောက်သားတွေ အတွက် ဥစ္စာ အမွေအစား အမှားအမှန် အကောင်းအဆိုး အကြောင်းအကျိုး ကို အမှန်အတိုင်း ဆက်စပ်ဝေဖန် စဉ်းစားတွေးခေါ်နိုင်မဲ့ ပညာအမွေကိုပေးလိုပါတယ်။